कांग्रेसको निष्कर्ष : गठबन्धन छुटाएर भएपनि एमसीसी अनुमोदन - News Birat
कांग्रेसको निष्कर्ष : गठबन्धन छुटाएर भएपनि एमसीसी अनुमोदन
काठमाडौं, माघ २७ । नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।ेबिहीवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले एमसीसी देशको पक्षमा रहेको निश्कर्ष निकालेको नेता डा. शशांक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । महतले एमसीसी राम्रो अनुदान भएकोले गुमाउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । देउवाले सरकार एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो । ‘एमसीसी विद्युत र बाटोको लागि हो भनेर जनमानसमा भन्नुपर्छ र अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो ।
उहाँले गठबन्धन टुट्ने या कायम रहने भन्दापनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कुरा उठेको बताउनुभयो । पूर्व महामन्त्री कोइरालाले स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्नु पर्ने बताउनुभएको थियो ।
‘गठबन्धनको विषयमा मैले कुरा राखे, हामीले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरे । मेरो कुरामा धेरैको सहमति छ,’ कोइरालाले भन्नुभयो ।बैठकमा स्थानीय तहको चुनाव, भातृ संगठनको अधिवेशन लगायतको विषयमा कुरा भएको थियो । केही भातृ संगठनको अधिवेशन स्थानीय तहको चुनाव अगावै गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बिहीबार, २७ माघ २०७८, १८:२३ February 10, 2022 मा प्रकाशित